Qoraallo – Garanuug
Home / Qoraallo
February 13, 2017	Aragti, Qoraallo 0 3,575
Qoraalkan gaaban waxa uu warcelin u noqon doonaa qoraal lagu daabacay bogga maandoon.com, larkiisuna ahaa WAHAABIYA: DIIN IYO DAWLAD, uuna qoray Shaafici Xasan Maxamed. Si aad u akhrisato qoraalkaas lifaaqa hoose dhag sii. http://maandoon.com/wahaabiya-diin-iyo-dowlad/. Sida ka muuqata cinwaanka qoraalka, Shaafici waxa uu rabaa in uu iswaafajiyo magaca uu sito qoraalka ...
Madaxdeennu ma Hoggaamiyeyaal baa mise waa Maamuleyaal?
February 10, 2017	Aragti, Qoraallo 0 2,313
Weydiinta summada u ah qoraalkeennan, inta aynaan ka jawaabin ma isla sii fahannaa farqiga u dhexeeya hoggaamiye (leader) iyo maamule (manager)? Inta badan waxa aad moodda in ay isku mid yihiin, laakiin ma aha e, waa loo maleeyey. Waxaa la sheegaa in hoggaamintu la soo bilaabantay aadamaha, kumannaan sano ka ...
Waraabaha ku Carar!
December 24, 2016	Qoraallo 0 5,888
Seben barwaaqo ahaa ayaa aanu geel ku haynay meel hawd sare ah oo doog iyo ugbaad badan. Hadda geeljire ayaa aanu ahayn oo reero lama aanu joogin. Beentu waa shay xaaraan ahe, anigu lix gu’ ayaa aan kolkaa jirey. Meeshu waa dhul shareeran oo hinni ah. Roobka gu’ga oo kolkaa ...
Suufinimo : Sooyaal iyo Saamayn
December 16, 2016	Qoraallo 0 5,524
Hordhac Dugsiyada fikir ee sameysmay boqolguuradii labaad ee tirsiga Hijrada waxaa ka mid ah fikirka Suufiga ah, oo aad u faafay saamayn badanna ku yeeshay dadka Musliminta ah dhexdooda. Suufinimadu waxa ay qayb ka noqotay fidinta iyo barashada diinta oo culumo badan oo suufiyo ah, ayaa dhulal badan ugu socodaalay ...
December 3, 2016	Af Soomaali, Falanqayn, Qoraallo, Suugaan, Waxqoris 2 7,979
June 19, 2016	Qoraallo, Xadiis 0 9,360
April 9, 2016	Aragti, Qoraallo, Saynis 7 9,882
Alle- kor ahaaye– markii uu uunkan sameeyey waxa ku dhex abuuray noole aynu ka mid nahay. Markii Aadan- calayhis salaam– la abuurayna waxaa la baray dhammaan magacyadii waxyaalihii jirey. Isaga iyo Xaawo ba- calayhas salaam– waxaa loo kala sheegay dhirtii ku hareeraysneed kuwa dheefta u leh iyo kuwa dhibta u keeni ...
Taariikhda Calanka Soomaaliya
October 12, 2015	Abwaan, Qoraallo 0 9,221
Dhammaadkii Luulyo 1954 tii ayaa Danjire Maxamad Kamaaludiin Saalax oo ka mid ahaa saddex danjire (Masar, Koolombiya, Filibbiin) oo ay Qaramada Midoobay (UN) u soo dirtay Soomaliya 1949 kii si ay Talyaaniga u la ogaadaan sida Tobankaa sano loogu diyaarinayo koofurta Soomaaliya si ay u hanato dawladnimadooda. Danjire Kamaaludiin wuxuu ...
October 7, 2015	Qoraallo, Waxbarasho, Waxqoris 0 6,724
Earl Nightingale waxa uu baadhayay iskuna taxallujiyay guusha muddo tobanaan sanno ah, si dhab ahna waa uu u gudanayay shaqadiisa. Waxqabadkiisii inta u badan haddeer waa la iska illaaway, balse haddii aad in uun meel ku aragtid, waa kuwo u qalma in waqti la gesho ee ha sii dayn. Aniga ...